Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Azia Atsinanana tamin’ny Oktobra 2007
Azia Atsinanana · Oktobra, 2007
Tantara mikasika ny Azia Atsinanana tamin'ny Oktobra, 2007
Japàna : Mofo am-by-fotsy
Japana12 Oktobra 2007
I Lee dia manoratra ao amin'ny blaogy Tokyo Times [Anglisy] lahantsoratra mikasika itony mofo anaty boaty vy-fotsy amidin'itony fivarotana mivarotra hoazy [tsy misy mpivarotra] any Japàna itony. Oiwan Lam
Afrika Mainty09 Oktobra 2007
Myanmar : Miverina miandalana ny aterineto
Myanmar (Birmania)08 Oktobra 2007
Miverina mandeha miandalana ny aterineto any Myanmar araky ny nambaran'i Nyein Chan Yar tao amin'ny blaoginy [Anglisy sy Birmana], mandritra ny 6 ora amin'ny alina. Na dia izany aza, ireo adiresy sasany toa ireo izay ampiantranoan'i blogger.com (blogspot) dia mbola tapaka ihany. I Prachatai kosa dia manaparitaka amin'ny alalan'ny blaoginy...
Korea: Raha nihaona ny mpitondran'i Korea Atsimo sy Avaratra
Korea Atsimo08 Oktobra 2007
Inona moa ny dikan’ny fihaonana faharoa eo amin’ny mpitondra Koreana Tatsimo sy Tavaratra? Lohahevitra roa no banjinina. Ny voalohany dia ny tsy fitovian-kevitra eo amin’ny Mpiserasera sy ny haino aman-jerim-pirenena. Ny lohahevitra faharoa kosa dia ny dika politika sy toe-karena ao amin’io fihaonana io. Tsy vitsy ny mpibilaogy no manohitra...
Mianomara, Fijery avy ao Anatiny
Myanmar (Birmania)04 Oktobra 2007
Ny tranokala Birmana Underground [anglisy] dia namoaka tantaran'olona anankiray monina any Birmania, manoritra ny zava-nitranga tany hatramin'ny fiatoan'ny fifandraisana amin'ny aterineto. Manazava ny raki-tsary nandeha tamin'ny CNN androany 3 oktobra kosa i Yangon Thu mampiseho ny famoretana tany Mianomara. Preetam Rai
Korea Atsimo03 Oktobra 2007
Tamin'ny Alahady 30 Septambra 2007, dia nohavaozina ho eo amin'ny toerany indray ho pasitora mpitondra fitandremana ao amin'ny fiangonana Saemmul church, ilay pasitora naniraka mpitoriteny antsitram-po Kôreana 23, izay nisy naka an-keriny tany Afghanistàna. Io no narararaotin'ny mpiblaogy sansantsasany hiverenana tamin'iny raharaha sarotra iny. 결국 예상대로 된것같네요… 샘물교회에서는 93%이상의 지지를...
Laos02 Oktobra 2007
Myanmar (Birmania)02 Oktobra 2007
Nahazo lisitra misy ny anarana sy ny fikambanana nihavian’ireo mpitokatena sy sivily mihoatra ny 300 izay nosamborin’ny fitondrana miaramila eto Myanmar ny mpibilaogy Niknayman. Maro amin’ireo nosamborina ireo no avy amin’ny Mandatehezam-pirenena ho amin’ny demokrasia, antoko tarihin-dramatoa Aung San Suu Kyi (izay efa nahazo ny loka Nobel ho amin’ny fandriampahalemana...
Ny Feo demokratikan'i Birmania (DVB), fikambanana mpamoaka vaovao tsy mikatsaka tombotsoa, hany ahenoana ny vaovao avy ao Myanmar mbola maratra amin'izao fotoana izao no mitantara fa miezaka ny hampitsahatra ny fiainam-pahamasinan'ny mpanokatena ny miaramila. Some 300 monks who were arrested a few days ago were delivered to a garage just...
Korea: Myanmar sy Korea
Korea Atsimo01 Oktobra 2007
Inona no eritreretin’ny Koreana amin’ny toe-draharaha any Myanmar ? Mahaliana fa hitan’ny mpibilaogy ho mifandraika amin’ny tantaran’i Korea ny zavamisy any ary tahaka ny mifamatotra amin-dry zareo ilay firenena..Mampahatsiahy an’ireo mpibilaogy izay efa niainan-dry zareo tany Korea tamin’ny taona 1980 tany ho any ny zavamisy ao Myanmar ankehitriny. Lasa manana toerana...